Iwu kuki - BancaNEO
Akụrụngwa maka China
Fegwọ zuru ụwa ọnụ
Banking dị ka Ọrụ (BaaS)
Mmemme White Label Mmemme
Software dị ka Ọrụ (SaaS)
API dị ka ọrụ (AaaS)
Banlọ akụ Onlinentanetị
Bọchị ịmalite: 1st June 2021
Iwu kuki a na-akọwa otu esi eme ya Bancaneo.org (“anyị”, “anyị” ma ọ bụ “nke anyị”) na-eji kuki na teknụzụ ndị yiri ya na njikọ nke www.Bancaneo.org weebụsaịtị.
Kedu ihe kuki?
Kuki bụ obere faịlụ ederede etinye na kọmputa gị site na weebụsaịtị na mgbe ụfọdụ site na ozi ịntanetị. Ha na-enye ndị otu ozi ozi bara uru, nke na-enyere aka ịme ka nleta gị na webụsaịtị ha ka ọ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma. Anyị na-eji kuki iji hụ na anyị nwere ike ịghọta otu i si eji weebụsaịtị anyị yana iji hụ na anyị nwere ike imeziwanye weebụsaịtị.
Kuki anaghị enwe ozi gbasara gị ma ọ bụ nke nzuzo.
Olee otú anyị na-eji kuki
Anyị na-eji kuki iji hụ na ị ga-enweta ihe kachasị mma na weebụsaịtị anyị. Oge izizi ị gara na webụsaịtị anyị, a ga-ajụ gị ka ikwenye n'iji kuki anyị ma anyị na-atụ aro na ị kwenyere ikwe ka kuki na-arụ ọrụ na ngwaọrụ gị ebe ị gara ma na-agagharị na weebụsaịtị anyị iji hụ na ị nwetara weebụsaịtị anyị nke ọma. .
Ofdị kuki ndị anyị nwere ike iji gụnyere:
Kuki oge ga-adịru naanị oge ọbịbịa gị ma ehichapụ ya mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị. Ndị a na-akwado ọrụ dị iche iche dịka ikwe ka weebụsaịtị mata na onye ọrụ nke otu ngwaọrụ na-agagharị site na ibe na ibe, na-akwado nchebe weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ndị bụ isi.
Kuki na-adịgide adịgide
Kuki na-adịgide adịgide mgbe emechiri ihe nchọgharị gị, ma kwe ka weebụsaịtị cheta omume na mmasị gị. Mgbe ụfọdụ, weebụsaịtị na-eji kuki ndị na-adịgide adịgide iji nye mgbasa ozi ezubere iche dabere na akụkọ nchọgharị nke ngwaọrụ ahụ.
Anyị na-eji kuki na-adịgide adịgide iji mee ka anyị nyochaa ndị ọrụ gara na saịtị anyị. Kuki ndị a na-enyere anyị aka ịghọta otu ndị ahịa si abịa ma jiri saịtị anyị ka anyị wee nwee ike melite ọrụ niile.
Kuki siri ike
Kuki ndị a dị mkpa iji nyere gị aka ịgagharị na weebụsaịtị ma jiri atụmatụ ya, ma hụ na nchekwa nke ahụmịhe gị. Enweghị ọrụ kuki ndị a ị rịọrọ, dị ka itinye maka ngwaahịa na ijikwa akaụntụ gị, enweghị ike ịnye. Kuki ndị a anaghị achịkọta ozi gbasara gị maka ebumnuche ahịa.
Kuki ndị a na-anakọta ozi gbasara otu ndị ọbịa si eji saịtị weebụ, dịka ọmụmaatụ ndị ọbịa na-agakarị, yana ọ bụrụ na ha nwetara ozi ezighi ezi site na ibe weebụ. Ozi niile kuki ndị a na-anakọta bụ naanị iji melite otu weebụsaịtị si arụ ọrụ, ahụmịhe onye ọrụ yana iji bulie mgbasa ozi anyị. Site na iji weebụsaịtị anyị ị kwenyere na anyị nwere ike itinye ụdị kuki ndị a na ngwaọrụ gị, agbanyeghị ị nwere ike igbochi kuki ndị a site na iji ntọala ihe nchọgharị gị.
Kuki ndị a na-enye weebụsaịtị ohere icheta nhọrọ ị mere (dịka aha njirimara gị). Ihe ọmụma kuki ndị a na-anakọta bụ nke a na-agaghị amata (yabụ na ọ nweghị aha gị, adreesị wdg) na ha anaghị esochi ihe nchọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ. Site na iji weebụsaịtị anyị ị kwenyere na anyị nwere ike itinye ụdị kuki ndị a na ngwaọrụ gị, agbanyeghị ị nwere ike igbochi kuki ndị a site na iji ntọala ihe nchọgharị gị.
Ezubere iche kuki
Kuki ndị a na-anakọta ọtụtụ ozi gbasara omume nchọgharị gị. [Ndị netwọk mgbasa ozi nke atọ na-etinyekarị ha]. Ha na-echeta na ị gara na webụsaịtị ma kesaa ozi a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka ndị mgbasa ozi. Ndị otu a na-eme nke a iji nye gị mgbasa ozi ezubere iche
ihe gbasara gị na ọdịmma gị.
Kuki ndị ọzọ
Biko mara na ndị ọzọ (gụnyere, dịka ọmụmaatụ, netwọọdụ mgbasa ozi na ndị na-eweta ọrụ mpụga dịka ọrụ nyocha ahịa weebụ) nwekwara ike iji kuki, nke anyị na-enweghị njikwa. Kuki ndị a nwere ike ịbụ kuki nyocha / arụmọrụ ma ọ bụ kuki ezubere iche.
Nwere ike ijikwa na / ma ọ bụ hichapụ kuki ka ịchọrọ - maka nkọwa, lee aboutcookies.org. Nwere ike ihichapụ kuki niile dị na kọmputa gị ma ị nwere ike ịtọ ọtụtụ ihe nchọgharị iji gbochie itinye ha. Ọ bụrụ na ịme nke a, agbanyeghị, ịnwere ike iji aka gị dozie ụfọdụ mmasị oge ọ bụla ị gara na webụsaịtị anyị ma ọ bụ jiri Platform anyị yana ụfọdụ ọrụ na arụmọrụ anyị na-enye nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ.
Machibido ma ọ bụ jikwaa kuki, biko hụ 'Enyemaka' nke ihe nchọgharị gị na .ntanetị.
Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị [email protected]
Na Neo ebumnuche anyị bụ ịgbasa njikwa ego gị na ohere azụmahịa gị
BancaNEO bụ ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikikere nke MY NEO GROUP TRUST
Site na Giovanni Boccaccio N°29 - 20123, Milano - Italy
BancaNEO Sathel bụ onye isi na MasterCard Europe maka inyefe kaadị.
BancaNEO na Satchel na-arụ ọrụ n'okpuru Satchelpay UAB (reg Nr. 304628112) nke Supervision Service Department nke Central Bank of Lithuania nyere ikikere ma nyekwa ikike ụlọ ọrụ ego ego Nr. 28, jiri usoro ntinye aka nke ugwo Nr. 30600, nke na-eduzi azụmahịa n'okpuru iwu nke Republic of Lithuania.
BancaNEO - Kwadoro site na MY NEO GROUP TRUST
2022 - Ikike Niile Echekwabara.